eNasha.com - पेट्रोलियमको भाउ बढ्यो
महिनौँदेखिको खिचातानीपछि अन्ततः नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । वृद्धि सबैभन्दा बढी खाना पकाउने ग्याँसमा भएको छ । यसमा २०० रुपियाँले वृद्धि भएपछि अहिले १ हजार १ सय रुपियाँ मूल्यमा अडिएको छ । अझै पनि प्रति सिलिण्डर ७० रुपियाँ घाटा व्यहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले कुन बेला फेरि पनि यसको भाउ बढाउने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
त्यस्तै पेट्रोलको मूल्य ७३.५० पुगेको छ र यो ६.२५ प्रतिलिटरमा बढेको छ । यसमा सरकारले प्रति लिटर २ रुपियाँ नाफा पाउने छ । तर यता डिजेल र मट्टितेलमा सरकारलाई प्रति लिटर क्रमशः ४ रुपियाँ र २ रुपियाँ घाटा रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नै नसक्ने गरी बक्यौता राखेपछि केही समययता भारतीय आयल निगमले तेलको आपूर्तिमा घटाएको थियो । आपूर्ति घटाएका कारण नै राजधानीलगायत अन्य प्रमुख शहरहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको थियो । महिनौँसम्म राजधानीका पेट्रोल पम्पहरुमा गाडीका लाम थिए । र, केही समययता त उपभोक्ताहरुले वाक्क भएर अब त तेलको भाउ बढाए पनि हुने हो... भन्न थालिसकेका थिए ।
रमाइलो के छ भने, तेलको भाउ नबढाई पनि अहिले देखिएको असहज आपूर्तिलाई नियमित गर्न सकिन्थ्यो तर नाफा कमाउन पल्किएको नेपाल आयल निगम, भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरुका कारण भाउ बढाइकन छाडे । विज्ञहरु भन्छन्, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउने गरेको कर मात्र यदि हटाइदिने हो भने पहिलेकै साबिक मूल्यमा तेल सहज उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । तर सरकार र आयल निगमका कर्मचारी पाइआएको र खाइआएको रकम घटाउन चाहँदैनन् । त्यसैले त संसारमै नभएको कुरा यहाँ घट्छ । त्यो के भने, संसारको सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरु चाहिँ बोनस पनि पाउँछन् ।
त्यसैले न त सरकार, न त आयल निगमका कर्मचारी न त बुद्धिजीवीहरु नै यस विषयमा बोल्न रुचाउँछन् ।
एउटा तर्कलाई कुतर्क भन्न मिल्दैन । त्यो के भने, जुन देशमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन- त्यो कुरामा सरकारले जनतालाई राहत दिन आवश्यक छैन । तर फेरि पनि सरकारले घाटा खाइखाइ डिजल, मट्टितेल र ग्याँसमा क्रमशः ४, २ र ७० रुपियाँको छुट दिएर गर्न के खोजेको हो ? यो चाहिँ बुझिएन । बरु सबैमा बढाइदिएको भए ढुक्क त हुन्थ्यो !
पेट्रोल माओवादी संविधानसभा हल्ला सेलेब्रिटी मोबाईल awards streets hi-life अनुभव crisis समलिङगी celebrity festival events